Xiisado Ka Taagan Xuddur - BBC Somali - Warar
Xiisado Ka Taagan Xuddur
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Maarso, 2013, 15:28 GMT 18:28 SGA
Boqollaal qoys ayaa ka qaxay magaalada Xuddur ee xarunta gobolka Bakool kaddib markii ay halkaasi ka baxeen ciidammo Itoobiyaan ah oo muddo dheer gacanta ku hayay xukunka magaalada iyo ciidammo taageersanaa dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale waxa isna wararku ay sheegayaan in maamulkii halkaasi ka jirey ay iyaguna magaalada ka baxeen ka dib markii ciidamadu ka tegeen, ilaa haddana lama garanayo sababta. Wararku waxay kale oo xaqiijinayaan inay magaalada soo galeen ciidan ka tirsan xarakada al Shabaab oo iyagu haatan la wareegay xukunka Xuddur. Hasse ahaatee lama soo sheegin wax dagaallo ah oo ka dhacay magaalada dhexdeeda iyo wax dhimasho amma dhaawac ah.
Lama garanayo sababta ciidanka Itoobiyaanku halkaas uga baxeen hase ahaatee dadka arrimaha Soomaaliya u kuur gala waxay leeyihiin waxaa dhici karta inuu jiro khilaaf u dhexeeya Itoobiya iyo qaybaha Soomaalida qaarkood.